Ny zotram-piaramanidina etiopiana hanaovana fitsapana IATA Travel Pass
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny zotram-piaramanidina etiopiana hanaovana fitsapana IATA Travel Pass
IATA Travel Pass dia fampiharana finday fitsangatsanganana dizitaly hanatsarana ny fahombiazan'ny fanandramana na fanamarinana vaksinina ary hanombohana ny dia
Rehefa manomboka indray ny dia dia mila fampahalalana marina mifandraika amin'ny COVID-19 ny mpandeha
Ny fandraisana andraikitra IATA Travel Pass dia manampy amin'ny fanamarinana ny maha-azo antoka ny mombamomba ny fitsapana natolotry ny mpandeha
Ny Ethiopian Airlines dia nandeha niomerika tamin'ny asany rehetra hialana amin'ny fifandraisana ara-batana
Nanambara ny Ethiopian Airlines fa hitsapa ny IATA Travel Pass, fampiharana finday fitsangatsanganana dizitaly hanatsarana ny fahombiazan'ny fitiliana na ny fanamarinana vaksinina ary hanombohana ny dia indray.
Rehefa manomboka indray ny dia dia mila fampahalalana marina mifandraika amin'ny COVID-19 toy ny fitsapana sy ny fepetra takiana amin'ny vaksiny izay tsy mitovy amin'ny firenena ny mpandeha. Ny fandraisana andraikitra IATA Travel Pass dia manampy amin'ny fanamarinana ny maha-marina ny mombamomba ny fitsapana asehon'ireo mpandeha izay tena ilaina amin'ny fiantohana ny fiarovana ny mpandeha raha mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny firenena. Amin'ny ho avy dia hitantana mari-pankasitrahana vaksinina ho an'ny dia ihany koa izy io.
Ethiopian Airlines dia niomerika tamin'ny asany rehetra mba hialana amin'ny fifandraisana ara-batana sy hiadiana amin'ny fihanaky ny areti-mifindra ary izao dia manomboka izao hetsika izao izay ahafahan'ny mpandeha mankafy ny traikefa momba ny sidina tsy manam-paharoa.
Mikasika ny fitsapana ny pass de làlana IATA dia Andriamatoa Tewolde GebreMariam, CEO an'ny Group
Nilaza ny Ethiopian Airlines fa “zava-dehibe ny teknolojia nomerika hamahana ireo olana maro nateraky ny areti-mandringana. Faly izahay fa manolotra fotoana dizitaly vaovao ho an'ireo mpandeha hahafahanay mamerina amin'ny laoniny ny dia an-habakabaka. Ny mpanjifanay dia hankafy ny traikefa fitsangatsanganana mahomby, tsy misy fifandraisana ary azo antoka amin'ny pasipaorony nomerika mandalo. Amin'ny maha-zotram-piaramanidina fiarovana voalohany antsika, dia ho anisan'ireo voalohany hampihatra ny laharam-pahamehanan'i IATA hanamora ny fivezivezena izahay. Ny hetsika vaovao dia hampitombo ny fahatokisan'ny mpandeha ny dia, hampirisika ny governemanta hanokatra ny sisintaniny ary
manafaingana ny indostrian'ny varotra. “
Ny Travel Pass dia hanampy amin'ny famoronana pasipaoro niomerika, hahazo mari-pankasitrahana sy fanamarihana vaksiny ary hanamarina fa ampy amin'ny làlan-kalehany izy ireo, ary mizara mari-pahaizana momba ny fizahana na vaksiny amin'ireo zotram-piaramanidina sy manampahefana hanamorana ny dia. Hisoroka ireo antontan-taratasy hosoka koa ny fampiharana fitsangatsanganana nomerika ary hanamora kokoa ny fivezivezivezy amin'ny rivotra.
Alexandre de Juniac, Tale jeneraly sy tale jeneralin'ny IATA dia nilaza fa: "Ethiopian Airlines dia manampy amin'ny fametrahana ny fototra ho an'ny tontolo iray mifandray indray izay hananana mari-pahaizana momba ny fahasalamana - valim-panadinana COVID-19 ho an'ireo mari-pankasitrahana momba ny vaksiny. IATA Travel Pass dia mamela malalaka ireo mpandeha hivezivezy mifehy ny angon-drakitra ara-pahasalamana voamarina eo am-pizarana izany amin'ireo zotram-piaramanidina sy manampahefana araka izay takiana amin'ny fizotry ny dia. Hanan-danja tokoa izany rehefa afaka manokatra sisintany ho an'ny dia lavitra ny governemanta. Amin'ny maha mpiara-miombon'antoka amin'ny fitsapana IATA Travel Pass dia ho isan'ireo voalohany mahatsapa ny tombony azo avy aminy ny mpanjifa Ethiopian Airline. ”
Ny fitsidihan'ny filohan'ny komity fizahan-tany afrikanina any San Pedro, Ivory Coast dia mitondra fientanam-po sy fanantenana